Firaisana tsikombakomba – Trafikana sokatra: zandary roa lahy tratra ary naiditra am-ponja | NewsMada
Par Taratra sur 12/04/2021
Zandary am-perinasa roa lahy voarohirohy ho niray tsikombakomba amin’ny tambajotra mpanao trafikana sokatra, any amin’ny distrikan’i Beloha. Naiditra am-ponja vonjimaika avy hatrany, ny faran’ny herinandro teo, izy roa lahy ireto.
Zandary miisa roa indray naiditra am-ponja vonjimaika noho ny resaka fanondranana antsokosoko sokatra tao amin’ny distrika Beloha, faritra Androy, afakomaly. “Hatramin’ny fiantombohan’ny krizy ara-pahasalamana eto amintsika, nanomboka nirongatra ny fihazana sokatra tao amin’io faritra io”, hoy ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, Raharinirina Baomiavotse Vahinala. Na izany aza, tsy nitsahatra naharay fitarainana avy any an-toerana ny eo anivon’io minisitera io ka nitsirika ifotony ny zava-mitranga tamin’ny alalan’ny fiara-miasan’ny solotenan’izy ireo any an-toerana sy ny eo anivon’ny zandary ary ny Turtle Survival Alliance (TAS), fikambanana miaro ny sokatra. Tra-tehaka tamin’izany ny sokatra niisa 193 ka maty ny iray amin’izy ireo raha toa ka marary ny 45.
Tsy handefitra ny minisitera…
Marihina fa zana-tsokatra avokoa ny 187 amin’ireo biby sarona ireo. Efa noraisin’ny minisitera an-tanana avokoa ny fitsaboana ireo rehetra tsy salama ary naverina amin’ny toerana fonenany ireo sokatra hafa. Etsy ankilany, mitohy ny fanadihadiana mahakasika ny mpiray tsikombakomba amin’ ireo zandary niisa roa naiditra am-ponja noho ny fihazana sy ny fanondranan-tsokatra tsy ara-dalàna ireo. Natsidiky ny minisitra fa tsy handefitra velively amin’ireo minia mandripaka harem-pirenena izy ireo ary mampihatra avy hatrany ny lalàna ho an’izay manao izany.